त्यो दिन बिहे गरेर लगेको रात…. – Enepali Samchar
त्यो दिन बिहे गरेर लगेको रात….
May 9, 2021 adminLeaveaComment on त्यो दिन बिहे गरेर लगेको रात….
e nepalisamchaar // काठमाडौं l फोनकै कुराकानीमा बसेको माया प्रेमले यतिसम्म गराउला भन्ने बेलडाँडी गाउँपालिकाका १८ वर्षीया अनुजा परिवर्तित नाम० ले सपनामा समेत सोचेकी थिइनन्। तीन–चार महिना फोन कुराकानी भएपछि बेलौरी नगरपालिका–७ रामनगरका २५ वर्षीय देव रानाले अनुजासँग बिहेको प्रस्ताव राखे।
देवकीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रहरी निरीक्षक बोहराले भने, ‘सबै थोक दिन सक्छु तर शारीरिक सुखभोग दिन सक्दिनँ भनेर सबैसामु भनेका छन्। उनको भनाइले पनि उनी केटा चै होइनन्।’ उनका परिवारका अनुसार सानैदेखि देवकीले केटी भएर पनि केटाकै हाउभाउ देखाउने गरेका थिए।enepalisamchaar
खुसीको खबर कोरोनको उपचार अब रबि लामिछानेको टिमले निशुल्क गरिदिने यसरी गर्नुहोस् सम्पर्क (पुरा जानकारी)
तँपाईले खोजेकै ठाँउमा घर बिक्रीमा मात्र7लाख 99 हजार छिटो सम्पर्क गर्नुहोस
मानवता लाइ बिर्सेको प्रचण्ड नेपालको हडताल चियानास्ता पसल सञ्चालन गरेको भन्दै खन्याइयो तातो तेल, आमा-छोरी घाइते